Ngabe uDonal Trump uzokwazi yini ukumisa ukuzibandakanya kwe-US Esivumelwaneni saseParis? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngabe uDonal Trump uzokwazi yini ukumisa ukuzibandakanya kwe-US Esivumelwaneni saseParis?
Ukukhuluma ngokushintsha kwesimo sezulu njengamanje kukhulunywa ngakho Isivumelwano saseParis. Lesi sivumelwano esiyingqophamlando lapho amazwe ayi-103 aqinisekisile futhi azonciphisa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa manje sesithathe isikhundla se-Kyoto protocol. Ekhethweni lobumengameli baseMelika ukhethwe UDonald Trump.
Kusukela kuqale izivumelwano zokumisa ukuguquguquka kwesimo sezulu, uDonald Trump akaze abandakanyeke nakancane. Ngokuphambene nalokho, le ndoda ikholelwa ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kunjalo ukusungulwa kwamaShayina ukuceba nokugcina abantu besaba. Ngokunqoba kukaDonald Trump okhethweni lobumengameli baseMelika, kunovalo lokuthi iSivumelwano SaseParis singathinta uhlaza. Ngabe uDonald Trump angamisa ukubandakanyeka kwe-US Esivumelwaneni Sokushintsha Kwesimo Sezulu?
UNgqongqoshe waseFrance Wezemvelo, Ségolène Royal, ukuqinisekisile namuhla ukuthi ukunqoba okhethweni lukamongameli wase-US lukaDonald Trump ngeke ikwazi ukuvimbela ukusetshenziswa kwesivumelwano ngokuguquguquka kwesimo sezulu esasayinwa ngoZibandlela wangonyaka odlule, kubhekwa inqubekelaphambili yokuqinisekiswa. Amazwe ayi-103 aqinisekise iSivumelwano SaseParis anesibopho Ama-70% wokukhishwa kwegesi yokushisa komhlaba.
UTrump, ngesikhathi somkhankaso wokulwa nokuguquguquka kwesimo sezulu ngaphambi kweSivumelwano, wamemezela inhloso yakhe yokuchitha leso sivumelwano, ecabanga ukuthi ushintsho lwesimo sezulu alukho. Ukuqinisekisile lokho izokhipha yonke imali yase-US yeZizwe Ezihlangene eziphathelene nokuguquka kwesimo sezulu. Kodwa-ke, iRoyal ithi uTrump ngeke isilahle isivumelwano seParis.
Ekugcineni, ngesikhathi somkhankaso wakhe wokhetho, uDonald Trump uchaze ukuthi inqubomgomo yakhe yamandla nezemvelo, engeke ivuselelwe, uzofuna ukubuyisa iphrojekthi eyimpikiswano ye Ipayipi le-Keystone XL.
“Ngifuna yakhiwe, kodwa ngifuna ingxenye yenzuzo. Yile ndlela futhi esizokwenza ngayo izwe lethu licebe futhi "kusho uDonald Trump.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ngabe uDonal Trump uzokwazi yini ukumisa ukuzibandakanya kwe-US Esivumelwaneni saseParis?
Yilokhu izimoto ezihlomile ezizingela iziphepho ezinjengalezi
Liyini iqabunga lekhabe?